डोनल्ड ट्रम्पबिरुद्ध सदनद्वारा महाभियोग पारित, अब के हुन्छ ?
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » डोनल्ड ट्रम्पबिरुद्ध सदनद्वारा महाभियोग पारित, अब के हुन्छ ?
काठमाडौ । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबिरुद्ध सदनद्वारा महाभियोग पारित भएको छ । अमेरिकी इतिहासमा दुई पटक महाभियोग लाग्ने पहिलो राष्ट्रपति ट्रम्प बन्नुभएको छ । संसद्‌मा भएको घटनामा आफ्ना समर्थकको भिडलाई उत्साहित गरेको आरोपमा उहाँविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्ताव तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सबाट पारित भएको हो।
गत बुधवार अमेरिकी संसद् भवनमा भएको घटनाका लागि प्रोत्साहित गरेको अभियोगमा उहाँविरुद्ध डेमोक्र्याट सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । ट्रम्पको दलका १० जना सांसदले महाभियोगको पक्षमा मतदान गरेपछि उक्त प्रस्ताव २३२ मतले पारित भएको सभामुख न्यान्सी पेलोसीले जानकारी दिनुभयो ।
महाभियोग पारित हुन २१७ मत आवश्यक थियो। तल्लो सदनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका २२२ जना सदस्य हुनुहुन्छ । विपक्षमा १९७ जना रिपब्लिकन सांसद थपिनुभयो । तल्लो सदनले सन् २०१९ मा पनि उहाँविरुद्ध महाभियोग पारित गरेको थियो। तर त्यस बेला कुनै रिपब्लिकन सांसदले महाभियोगमा साथ दिनुभएको थिएन ।
सिनेटले उहाँलाई आरोपमुक्त गरिदिएको थियो। यस पटक भने सिनेटमा महाभियोगको छलफल उहाँ पदमुक्त भएपछि मात्रै हुनेछ। सिनेटले उहाँलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न प्रतिबन्ध लगाउन पनि मतदान गर्न सक्छ।
अब माथिल्लो सदनमा के हुन्छ ?
सिनेटबाट पनि पारित हुन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। त्यो सङ्ख्या पुर्‍याउन ट्रम्पको दलका सिनेटरहरूको पनि साथ आवश्यक हुने बताइएको छ। कम्तीमा १७ जना रिपब्लिकन सिनेटरहरू ट्रम्पको विपक्ष र महाभियोगको पक्षमा उभिनुपर्नेछ। न्यूयोर्क टाइम्सले २० जना रिपब्लिकन सिनेटर ट्रम्पलाई दोषी ठहर्‍याउने पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको छ। यसले गर्दा उहाँ बिरुद्धको महाअभियोग सिनेटबाट पनि पारित हुने देखिन्छ ।
के ट्रम्प फेरि उम्मेदवार हुन पाउँनुहुन्छ ?
हो, पाउँनुहुन्छ । किन कि महाभियोगले मात्र उहाँलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न रोक्दैन। तैपनि सिनेटमा हुने सुनुवाइले उहाँमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न बाँकी नै छ। दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने भएकाले डेमोक्र्याटहरूकै बलमा मात्र सिनेटमा आरोप पुष्टि हुन सम्भव हुनेछैन। तर रिपब्लिकनहरूको साथ पाएर त्यो पारित भयो भने पनि उम्मेदवार बन्न नदिन अर्को मतदान गराउनुपर्ने हुन्छ।
ट्रम्पले सन् २०२४ मा उम्मेदवार हुने सङ्केत दिएकाले त्यसबारे चासो राखेको पाइन्छ। कतिपय रिपब्लिकनहरूले महाभियोग नलगाएर राष्ट्रपति बन्न रोक्ने उपाय अपनाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभएको थियो ।
यसअघि तल्लो सदनले संविधानको एउटा प्रावधानअनुसार ट्रम्पलाई पदमुक्त गर्न उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई सहयोगको आग्रह गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। पेन्सले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएपछि डेमोक्र्याटहरू महाभियोगको प्रक्रियामा अघि बढाएको देखिन्छ ।
फुटपाथमा सुतेका मदजुरमाथि ट्रक कुदेपछि १५ जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते